Ellicott dia manolotra andiany 370 Dragon® Dredge ho an'ny asa fiompiana makamba any Mexico - Ellicott Dredges
Ellicott dia manolotra andiany 370 Dragon® Dredge ho an'ny asa fiompiana makamba any Mexico
Vao avy nanatitra sy nanangana Dragon Series 370 i Ellicott® dredge ho an'ny toeram-piompiana makamba any amin'ny morontsirak'i Pasifika any Mexico.
Ny dredge Ellicott 370 dia misy paompy 12 "x 10", mametraka herinaratra 416 HP ary mety hahatratra 10 metatra (33 ft).
Ny dredge dia nahazo ny mpandraharaha fiompiana makamba, izay nisafidy Ellicott® dredge noho ny lazany ho azo itokisana sy mateza ao anatin'ny fepetra mavesatra. Ny dredge dia hampiasaina hanesorana ny antsanga sy hihazonana ny fantsona fidirana an-dranomasina izay mikoriana ao amin'ny lagoon fiompiana makamba.
Noho ny kalitao sy ny fahatsoran'ny fandidiana sy ny fikojakojana, ny Ellicott 370 dia iray amin'ireo dredges malaza indrindra any Mexico. Ellicott dia nanana fanatrehana matanjaka tany Meksika nandritra ny am-polony taona maro, miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika eo an-toerana nomena tamin'ny alàlan'ny solontenany nahazo alalana tao amin'ny Makisur SA